Home Wararka Hoobiyeyaal lagu gaaracayo Madaxtooyada Soomaaliya (Deg Deg)
Hoobiyeyaal lagu gaaracayo Madaxtooyada Soomaaliya (Deg Deg)
Waxaa goor dhow lagu soo tuuray hoobiyaal dhowr ah xarunta Madaxtooyada JFS oo ah hoyga uu degan yahay Madaxweyne M. Farmaajo.
Weli lama oga qasaaraha ka dhashay hoobiyaasha lagu garaacay Villa Soomaaliya, goobjoogayaal la hadlay MOL aya u sheegay in madaxtooyada dhexdeeda ay ka jirto kala carar, ciidankana la geliyay heegan.
Hoobiyaha la soo tuuray ayaanan weli noociisa oo kale lagu arag magaalada Muqdisho, waxaana uu lahaa dhawaq ka duwan hoobiyaasha lagu yaqaan kooxda Al Shabaab.
Wixii soo kordha dib ayaan idiinkaga soo sheegeynaa
Previous articleDowladda Federaalka waa in ay joojisaa faragelinta doorashada KG. (War Saxaafadeed)
Next articleMusharaxiin iyo odayaasha beelaha Digil & Mirifle oo diiday in ay ka qeyb galaan doorashada (Akhriso)
Puntland oo Joojisay Dhaqdhaqaaqa Gaadiidka ee Degmooyinka iyo Gobolada
Dagaal ka dhacay Gobolka Sh-hoose